Soundcloud waa mid ka mid ah dhufto audio ugu caansan oo si fiican u yaqaan in adduunka oo waa meel ay dunida ka music ma aha oo kaliya fursad u helaan si ay u qoraan iyo boostada dhawaaqa balse waxay sidoo kale wadaagaan oo iyaga ka soo dejisan. Madal Tani waxay la mid tahay isku xirka madal bulshada ee ku caashaqay music oo dunida ku baahsan. Out of dhan qaababka, shaki kuma jiro oo ku saabsan xaqiiqada ah in feature ugu fiican ee madal waa in aad karaa download kuwan raadkaygay iyo dhawaaq u dhex. Si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa in had iyo jeer aad uma hesho in ay si toos ah u samayn, oo waxaa laga yaabaa in ay u isticmaalaan sida TunesGo inay sidaa sameeyaan.
Sida loo download music ka soundcloud in Lugood isticmaalaya TunesGo
Soundcloud sida aad Source Music Personal
Tallaabada 3 play music / geeyo
Hadda waxaad u baahan tahay inuu ciyaaro ama qulquli music aad rabto si ay u qoraan. Si ay u qoraan, furan oo markaas la ciyaari track la doonayo.
Wondershare TunesGo waxay noqon karaan qaar la yaab leh madal kuwa raba inay muusikada iyo playlists ka Soundcloud laakiin aan awoodin in ay si toos ah u samayn. Madal Xaqiiqadii tani waa kala iibsiga music iyo app maaraynta kaas oo sidoo kale kaa caawinaysaa in aad kala soo bixi kuwan raadkaygay ku qalab aad. Kuwa soo socda waa 5 qaababka ugu muhiimsan ee TunesGo:
Ka dhigaysa 1. Transfer music-TunesGo waxaa suuragal ah in aad si ay u gudbiyaan music dhexeeya dhufto ee kala duwan iyo nidaamyada hawlgalka oo ay ku jiraan Lugood iyo Android iwm waxa ay sidoo kale kaa caawin kara music u hagaagsan u dhexeeya aad telefoon iyo PC iyo sidaas kuu ogolaanaysaa inaad ku raaxaysato music on qalabka oo dhan oo aan haysan si ay u gacanta u gudbiyaan.
2. Maamul music-kale feature cajiib ah TunesGo waa in aad maamuli kartaa music isticmaalaya madal this. Waxay ka caawisaa in uu abaabulo raadkaagu iyo saarto kuwa soo noqnoqda in ay ka fogaadaan decluttering iyo wareer.
3. Maamul music-kale feature cajiib ah TunesGo waa in aad maamuli kartaa music isticmaalaya madal this. Waxay ka caawisaa in uu abaabulo raadkaagu iyo saarto kuwa soo noqnoqda in ay ka fogaadaan decluttering iyo wareer.
4. dib u soo celineysa iyo gadaashaba-up files-TunesGo sidoo kale aad bixisaa feature yaabka ilaa taageero iyo soo celinta aad music iyo noocyada kale ee files oo taasi ka dhigan tahay in aad music lahaa marnaba lumaan xitaa marka aad shil nidaam wajihi.
5. Record music-kale feature oo TunesGo ka Wondershare waxay bixisaa in aad waa in ay kuu ogolaanaya in aad sidoo kale si ay u qoraan music live oo ka dib ku raaxaystaan. Asal ahaan waa boosteejo ah kaas oo aad ku qori karta dhawaaqa ama music socda ee asalka ah ku saabsan habka iyo in sidoo kale aan rabshooyin kasta.
> Resource > Music > Sida loo Download Music ka Soundcloud in Lugood